Yimuphi opharetha weselula one-Intanethi esheshayo ku-4G LTE? Ulator I-Emulator.online ▷ 🥇
E-Italy, amanethiwekhi omakhalekhukhwini enze ushintsho olukhulu uma kuqhathaniswa nokwedlule futhi ngemuva kokuhlangana phakathi kwezinethiwekhi ezimbili ezinkulu ze-Intanethi, i-Wind kanye nabathathu, sinokungena emkhakheni we-Iliad opharetha, onamanani aphansi lenza umncintiswano omkhulu nabanye opharetha bendabuko (abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3 ngonyaka nohhafu). Kepha phakathi kwabo bonke laba opharetha Yikuphi okufanele ukhethe ngokuya ngejubane loxhumano lwakho lwe-Intanethi? Kulula ukuthatha izethembiso zamanga zezikhangiso nemidwebo enikezwa yi-opharetha uqobo (imvamisa okungamanga) bese ukhomba opharetha ongalungile wedolobha lethu noma wendawo esihlala kuyo.
Uma sifuna ngempela ukuthola yimuphi opharetha weselula one-Intanethi esheshayo ku-4G LTE Endaweni yethu, ufinyelele kumhlahlandlela ofanele: lapha sizokukhombisa zonke izivivinyo ezizimele ezenziwa ngabantu besithathu noma ngabasebenzisi bo-opharetha abahlukene uqobo, ukuze wazi ngokunembile uma kukhona ukumbozwa okuhle emgwaqweni esihlala kuwo (kubalulekile ube nesivinini esihle) nokuthi yisiphi isivinini esingafinyelela ngaso opharetha okhethiwe.
FUNDA NONKE: Uhlelo lokusebenza lokuhlola inethiwekhi yedatha yeselula
I-opharetha ye-Intanethi esheshayo ku-LTE
Ezahlukweni ezilandelayo sizokukhombisa izivivinyo ezenziwe ngabantu besithathu ukuhlola ukushesha kokuxhumeka kwe-Intanethi ezweni lonke futhi, kulabo abafuna ukwazi ijubane edolobheni noma emgwaqweni lapho behlala khona, sizokubonisa amathuluzi ukwazi ukwenza isivivinyo ngokuzimela, ngaphandle kokuthenga iSIM kuqala. Ngaleso sikhathi Sizobona ubuchwepheshe be-4G LTE kuphela, isasakazeke kakhulu futhi iyakwazi ukunikeza isivinini esihle cishe kuzo zonke izimo (sithola i-5G emadolobheni amakhulu kuphela).
Ukuhlolwa komzimba okuzimele
Uma sifuna ukwazi ngokushesha ukuthi yimuphi opharetha ohamba phambili wase-Italy ngejubane elijwayelekile kulayini weselula, singalanda futhi sihlaziye i-PDF enikezwa yiSpeedTest, ekhipha minyaka yonke inethiwekhi esheshayo e-Italy.
Ngokwegrafu nedatha ebikwe ngalolu cwaningo, inethiwekhi esheshayo ye-LTE e-Italy iyi Tre umoya ngamaphuzu aphelele angama-43,92 (owine umklomelo we-Speedtest). Cishe amaphuzu ayi-10 ngemuva siyathola TIM ngamaphuzu angama-32,95, Iliad enamaphuzu angama-31,34 nomsila omangele Vodafone, efinyelela ezivivinyweni ngamaphoyinti angama-30,20 kuphela. Le mininingwane yethula izimanga eziningi eziwisa phansi izihloko eziningi: I-Wind Tre iyahola futhi ishaya i-TIM (ebilokhu ibhekwa njengehamba phambili e-Italy) kanti iVodafone iwa kabuhlungu, nayo ishaywa yi-Iliad (ukufika kokugcina).
Ukuhlanganisa le datha bese siyitolika kahle kufanele sicabangele enye umzimba ozimele wokuhlolwa kwejubane, okungukuthi I-OpenSignal (abanikazi besicelo esidumile). Ngokuthola ikhasi le-broadband snapshots, singabheka izifunda eziyinhloko zase-Italy, siqhathanisa ukumbozwa kwabo bonke opharetha emadolobheni, emaphethelweni nasezindaweni zasemakhaya.
Ngokuhlaziya ngokucophelela amashadi, siyabona ukuthi i-Fastweb ne-TIM zisebenza kahle cishe kuzo zonke izimo (ikakhulukazi emadolobheni), IWindTre ilala isibili ngejubane emadolobheni futhi iphethe ezindaweni zasemakhaya kanti iVodafone nayo iyona esebenza kabi kakhulu (uma izindawo zasemadolobheni zaseLombardy naseSicily zingafakwanga). I-opharetha ye-Iliad ayitholakali kuleli grafu, ayicatshangelwa ukuhlolwa (mhlawumbe izofakwa ngokuzayo).
Ungasihlola kanjani isivinini senethiwekhi yakho ngokwakho
Asifuni ukulandela iziphakamiso zokuhlola ezizimele futhi sifuna "ukuthinta" isivinini senethiwekhi endaweni yethu noma ekhaya? Kulokhu, sincoma ukuthi usebenzise ifayela le- ukumbozwa nemephu yejubane enikezwe iNperf itholakala kuwebhusayithi esemthethweni.
Kusuka kule sayithi kuzokwanela ukukhetha opharetha ukuthi ahlole futhi aqinisekise kokubili ukutholakala kwenethiwekhi (i-LTE ne-LTE Advanced) kanye nejubane langempela elibikwe izivivinyo ezenziwa abasebenzisi. Lapho usukhethe opharetha, chofoza Ukusabalala kwenethiwekhi noma yakhe Ijubane lokulanda Ukukhetha ukuthi yikuphi ukuhlolwa ongakusebenzisa bese usebenzisa imephu engezansi ukusesha idolobha, indawo noma umgwaqo lapho sihlala khona noma lapho sifuna ukuhlola khona, futhi sisebenzisa inkambu yokusesha etholakala engxenyeni engenhla kwesobunxele yemephu. Leli thuluzi lingaba wusizo olukhulu ngokwesibonelo uma kufanele sithenge indlu entsha noma irenti, ukuze sikwazi ukubheka ukuthi iyiphi i-opharetha enhle futhi uma kunesidingo sokushintsha i-SIM ngenkathi sigcina inombolo, njengoba kubonakala nakwisiqondisi. Ungakwenza kanjani ukuthwala kwenombolo futhi ushintshe ukunikezwa kwefoni.
Ngenye indlela esingayisebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-OpenSignal, etholakala mahhala kwe-Android ne-iPhone.
Ngokufaka lolu hlelo lokusebenza nokunikeza zonke izimvume ezidingekayo, sizokwazi ukuqinisekisa ukumbozwa kwe-LTE nesivinini se-inthanethi eselula sanoma imuphi umgwaqo noma indawo e-Italy; ukuqhubeka, okumele sikwenze ukuvula imenyu ezansi mapa, linda ukutholwa kwesimo sethu bese ucindezela ngaphezulu kwemenyu Yonke i-2G / 3G / 4G, ukuvula imenyu lapho ungakhetha khona opharetha weselula ukuthi ayihlole nohlobo lwenethiwekhi (kulokhu kuhlolwa sincoma ukuthi ushiye into kuphela 4G).
Ngokuhlolwa kwezinhlangano ezizimele kanye nezivivinyo esingazenza ngekhompyutha noma nge-smartphone yethu, singamthola ngokushesha opharetha we-Intanethi ongcono kakhulu endaweni yethu, ukuze sihlale sihamba ngesivinini esiphezulu, ngaphandle kokuwela ezingibeni nasezikhangisweni Opharetha bavame ukuya kuthelevishini noma emsakazweni. Ukuhlolwa okuzimele kusho IWind Tre ingumqhubi ophakeme kunabo bonke e-Italy, kepha lo mphumela kufanele uthathwe ngokuqapha: kungcono ukuzihlolela wena uqobo ukwembozwa futhi uqiniseke ukuthi kuhambisana kahle ekhaya lethu noma ehhovisi.
Uma sifuna inethiwekhi esheshayo esheshayo kuzofanele sigxile ku-5G, engakasakazeki kepha esezingeni eliphakeme kune-4G; ukwazi okwengeziwe singafunda umhlahlandlela wethu Ungakuqinisekisa kanjani ukufakwa kwe-5G.
Uma, ngokuphambene nalokho, sifuna indlela yokuqinisekisa ukumbozwa kwe-fiber optic yomugqa ohleliwe, siphakamisa ukuthi ufunde izindatshana zethu Ukufakwa kwe-fiber kwe-TIM, i-Fastweb, iVodafon, iWindTre nabanye mi I-Fiber Optic ehamba phambili: hlola ukumbozwa nokunikezwa.